एक अर्काबीच सुमधुर सम्बन्ध र जिवनकाल आनन्दित बनाउनका लागि यौनको भूमिका कति ? - Nepal Post Daily
एक अर्काबीच सुमधुर सम्बन्ध र जिवनकाल आनन्दित बनाउनका लागि यौनको भूमिका कति ?
एजेन्सी । यौनविना संरचनाको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । । यसले व्यक्तिगत सम्बन्धलाई बलियो मात्र पार्दैन तर अझ यसले एक अर्काबीच सुमधुर सम्बन्ध र जिवनकाल आनन्दित बनाउनका लागि निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्ध मात्रै होइन यसले दुई जनाबीचको समझदारी र सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउने काम गर्छ । जसले गर्दा खुशिले भरिएको जीवन विताउन पनि मद्दत मिल्दछ ।
Previous articleनरिवलको तेलका लगाउँदा हुन्छन् यस्ता फाइदा
Next articleपानीको बहाव बढेसँगै कोसी ब्यारेजका ३० वटा ढोका खोलिए
‘फ्लोर क्रस’ गर्ने एमालेका चार सांसद पदमुक्त [आदेशसहित]